Cheap 4 × 4 Twill Carbon Fiber factory na ndị na-ebu ya | Chengyang
Carbon Fiber Twill Fabric bụ ụdị eriri fiber ọhụrụ nke nwere ike dị elu na eriri modulus dị elu na ọdịnaya carbon dị elu karịa 95%.
Carbon fiber "n'èzí dị nro dị n'ime", ogo dị ọkụ karịa aluminom ígwè, ma ike dị elu karịa nchara, ike dị okpukpu asaa nke ígwè; ma nwee mmebi nke corrosion, njirimara dị elu, bụ ihe dị mkpa iji chebe ndị agha na ndị nkịtị.
FOB Ahịa: USD10-13 / sqm
Min.Order ibu: 10 sqm
Tụkwasịnụ Ikike: 50,000 sqm kwa ọnwa
N'ọdụ ụgbọ mmiri Port: Xingang, China
Mentkwụ Tergwọ Okwu: L / C na anya, T / T, Paypal, West UNION
Oge Mbuga ozi: 3-10days mgbe ịkwụ ụgwọ n'ihu ma ọ bụ kwadoro L / C natara
Mbukota nkọwa: Ejiri ihe nkiri kpuchie ya, tinye ya na katọn, tinye ya na pallets ma ọ bụ dịka onye ahịa chọrọ
Carbon Fiber Twill Fabric bụ ụdị fiber nke ọhụrụ nwere nnukwu ike na akwa modulus fiber na carbon ọdịnaya dị elu karịa 95% .Carbon fiber "n'èzí dị nro dị nro", ogo dị ọkụ karịa aluminom ígwè, mana ike dị elu karịa nchara, ike bụ 7 oge nke igwe; ma nwee mmebi nke corrosion, njirimara dị elu, bụ ihe dị mkpa iji chebe ndị agha na ndị nkịtị.
Ricdị ákwà Mkwado Yarn Eriri agụ (cm) Kpaa Obosara (mm) Ọkpụrụkpụ (mm) Arọ (g / ㎡)
H3K-CP200 T300-3000 5 * 5 Plain 100-3000 Ugboro abụọ 200
H3K-CT200 T300-3000 5 * 5 Ugboro abụọ 100-3000 Ugboro abụọ 200
H3K-CP220 T300-3000 6 * 5 Plain 100-3000 Ugboro abụọ 220
H3K-CS240 T300-3000 6 * 6 Satin 100-3000 Ugboro abụọ 240
H3K-CT280 T300-3000 7 * 7 Ugboro abụọ 100-3000 Ugboro abụọ 280
1) Ike dị elu, njupụta dị ala, ike nwere ike iru 6-12 ugboro nke nchara, njupụta bụ naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke nchara.
2) Ike ọgwụgwụ dị elu;
3) Nnukwu nkwụsi ike dị elu;
4) Ezigbo ọkụ eletrik na nrụpụta ọkụ;
5) Ezigbo arụmọrụ vibration arụmọrụ;
6) Ezigbo nguzogide okpomọkụ;
7) Esemokwu ọnụọgụ bụ obere na eyi eguzogide bụ magburu onwe;
8) Corrosion na-eguzogide ọgwụ na ogologo ndụ.
9) Ntinye X-ray buru ibu.
10) Ezi plastic, nwere ike ime ka ọ bụla udi dị ka ọdịdị nke ebu, mfe na-etolite na mfe hazie.
Carbon Fiber Twill Fabric A na-ejikarị ya eme ihe ịkụ azụ, akụrụngwa egwuregwu, ngwongwo egwuregwu, aerospace na mpaghara ndị ọzọ, ndị agha na-eji emepụta rọketi, akụ ụta, satellites, radar, ụgbọala mgbọ, akwa mgbọ na ngwaahịa ndị ọzọ dị mkpa ndị agha Dị ka ihe mkpuchi igwe, ndụdụ ihu igwe, ihe ndị ọzọ na-agba ịnyịnya, klọb golf, osisi hockey, osisi mkpịsị ụkwụ, mkpanaka ịkụ azụ, ụsụ baseball, agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba mmiri , ụgbọ mmiri, ogwe ndị dị larịị, akụrụngwa ọgwụ, ihe nzacha ntụ, uzuoku (igwe) ụlọ ọrụ ụgbọ ala, igwe ọrụ mmepụta ihe, mgbakwunye ụlọ, ikuku ikuku, wdg
5. Mbukota & Mbupu
Mbukota: mbupụ ọkọlọtọ mbukota ma ọ bụ ahaziri dị ka gị chọrọ.
Nyefe: site n'oké osimiri / site na ikuku / site na DHL / Fedex / UPS / TNT / EMS ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ ịchọrọ.
Nke gara aga: 1k Carbon Fiber Cloth
Osote: Blue Carbon Fiber Fabric
Q: 1. Enwere m ike ịnweta usoro nlele?
A: Ee, anyị na-anabata usoro nnwale iji nwalee ma lelee ogo.
Q: 2. Gịnị bụ ụzọ oge?
A: Ọ bụ dị ka iji ibu.
Q: 3. have nwere oke MOQ ọ bụla?
A: Anyị na-anabata obere iwu.
Ajụjụ: 4. Olee otu ị si ebu ngwongwo na ogologo oge ọ na-ewe abata?
A: Anyị na-ebukarị ụgbọ mmiri site n'aka DHL, UPS, FedEx ma ọ bụ TNT. Ọ na-ewekarị ụbọchị 3-5 iji rute.
Q: 5. Anyị chọrọ ileta ụlọ ọrụ gị?
A: Enweghị nsogbu, anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta na nhazi, ịnabata inyocha ụlọ ọrụ anyị!
Carbon Fiber Fabric Ahịa
Carbon eriri 4k
Ndị na-emepụta Carbon Fabric
Satin ikpaanu Carbon eriri
Acryli ntekwasa faiba glaasi, Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric, Uwe faiba glaasi, Aluminized faiba glaasi Cloth, Acryli faiba glaasi Cloth, Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth,